यौन टेप बाहिरिएका मन्त्रीको रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा स्टिङ अपरेसन [ भिडियोसहित ] – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको यौन टेपको स्टिङ अपरेसन चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा वीथ रविमा प्रशारण भएको छ ।उक्त भिडियो हामीले यहाँ उतारेका छौ । भिडियोमा पहिले प्रहरी कार्यालय महिला उजुरी गर्न गएको भिडियो प्रशारण हुन्छ ।
भिडियोमा मन्त्री शाही र महिलाबीच केही असहमझदारीकाबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको नै देखिन्छ । उक्त भिडियो हेर्दापनि प्रहरीले हदम्याद नाघेको भन्दै उजुरी लिन मानेन । बरु प्रहरीले आन्तरिक रुपमा नै मिलाउन सुझाव दिएर फर्काइदियो ।त्यसपछि महिला र उनका श्रीमानले मन्त्रीसँग कुरा गर्न थाले । रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा उक्त सबै सम्वादहरु श्रीमानले पठाएका थिए ।
त्यहाँ श्रीमानले भनेका छन् एक चोटी त्यो मन्त्रीले मेरो श्रीमतीलाई ल सरी है भनेको भएपनि चित्त बुझाउथे क्या दाई भन्दै सिधा कुराका टिमसँग बोल्छन् । कस्तो श्रीमान होला ?श्रीमतीलाई करणी गर्ने पुरुषले ल सरी है भन्दा नै सहने ? जे गर्न सक्छन् गर भन्ने त्यसको समस्या के हो बुझ् भन्ने तर उसले अहमता देखायो हैन । आखिर यो देशमा न्याय त होला नी भनेर म लागेको हो ।
महिला विकासबाटपनि गर्न सक्थे अदालतबाटपनि गर्न सक्थे । रवि दाई के खुट्टा छुनुपर्ने केही थिएन । किन रविदाईसँग पुगेको हो भने मैले यो मान्छेले यस्तो गरेको हो भन्ने देशभरी नै पुर्याउनुछ ।त्यसपछि घटना सार्वजनिक हुन लागेको थाहा पाएपछि मन्त्री शाहीले महिलालाई धम्कि दिन थाले । त्यसपछि महिलाले फेरी जीउ, ज्यानको सुरक्षा र करणीको मुद्धा लिएर प्रहरीसँग गइन् ।
पत्रकारले त्यो बेलाको कति हिसाब बिग्रिएको छ भनेर सोध्छन् श्रीमानले भन्छन् ८–९ लाख हो । त्यो मन्त्रीले लिएको छ त्यसको जिम्मा मैले लिएको छु । त्योपनि त मैले तिर्नुपर्छ उनले भनेका छन् । छोरी जस्तो मान्छेलाई त्यस्तो गर्नुभयो । माफी मागे छोडिदिने भने ।उनले म काठमाडौ गएको बेला मन्त्रीले यस्तो गरिरहेको छ भनेपछि प्रमाण चाहिन्छ दाई को मा जा क्यामेरा राख भने । भोलि लड्नका लागि बलियो हुन्छ भनेर रेकर्ड गरेको हो । त्यसपछि पत्रकारहरु त्यो बेलाको भिडियो लिएर मन्त्री शाहीको निवासमा पुग्छन् ।
त्यहाँ पत्रकारले भिडियो देखाउँदै यो त तपाई हो भन्दा हो म हो भन्छन् । उनी महिलाको कोठामा ढोका खोलेर छिर्छन् । त्यो भिडियोमा यो त तपाई हो नी भन्दा हो म भन्छन् । फिल्मी स्टाईलमा आएको छु म हेर्नुहोस् भन्छन् । त्यसपछि उनी हतासमा आउँछन् ।यो पुरै आइडीया वाला हो भन्छन् । त्यसपछि उनी निर्धक्कसाथ भन्न थाल्छन् । म मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि हामीसँगै बसेका थियौँ त्यो कोठामा । मैलै करणी गर्नै पर्दैन्थ्यो । कुरा बुझ्नु भा छ ?
Previous खाली भवनमा गएर विमान ठो क्कि यो, धनाढ्य ब्यक्तिको श्रीमती र छोरा सहित परिवारकै मृत्यु
Next श्रीमान विदेशबाट आएको केहिदिन पछी श्रीमती मृ’ त फेला परिन् ,कसले मा’ र्यो उनलाई (भिडियो हेर्नुस्)